वैशाख ८, वीरगञ्ज । प्रत्येक वर्ष धान खरीद गर्दै आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय वीरगञ्जले मंगलवारदेखि किसानसँग समर्थन मूल्यमा गहुँ खरीद शुरु गरेको छ । संस्थानले नगदमै किसानसँग गहुँ खरीद गर्न शुरु गरेको हो ।
यसअघि सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थानलाई धान बेच्दा राम्रो मूल्य पाएका किसान अहिले गहुँ बेच्न आकर्षित हुन थालेका छन् । सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रू. तीन हजार १११ निर्धारण गरेपछि किसानले सरकारलाई गहुँ विक्री गर्न थालेको किसान विजय पण्डितले बताए ।
संघीय सरकारले यस वर्ष तीन हजार क्विन्टल गहुँ खरीद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पहिलो दिन मंगलवार ४० क्विन्टल गहुँ खरीद गरिएको कार्यालय प्रमुख विकास कटुवालले बताए । संस्थानले एक किसानसँग बढीमा ४० क्विन्टल गहुँ खरीद गर्ने लक्ष्य राखेको कार्यालयका सूचना अधिकारी मुनिलाल कुशवाहाले बताए ।
अहिले गहुँको बजार मूल्य प्रतिक्विन्टल रू. तीन हजार रहेको छ । स्थानीय मैदा मिलहरूले प्रतिक्विन्टल रू. तीन हजार १०० का दरले किसानसँग खरीद गर्दै आएका छन् । पर्सामा यस वर्ष किसानहरुले २६ हजार ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरी ८५ हजार ९६५ मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका बाली विकास अधिकृत सुरेशप्रसाद चौरसियाले जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्षमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगञ्ज शाखाले सोना मन्सुली धान ३५ हजार क्विन्टल र जिरामसिनो धान ११६ क्विन्टल खरीद गरेको छ । रासस